Issuu: Ngwaọrụ Azụmaahịa, Ọ Bụghị Naanị Magazin | Martech Zone
Wednesday, April 25, 2012 Tọzdee, Eprel 26, 2012 Janneane Blevins
Isii a na-ejikọkarị ya na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ntanetị na ntanetị na-aga nke ọma, na-achọ akwụkwọ akụkọ ejiji, na ndị ọzọ nwere mmasị niche. Mana Issuu, ya na PDF iweghaara ngwa ngwa, nwere ike buru ahia ahia na ahia ya. Na KA + A, ka anyị na-aga n'ihu na-agbasawanye ndị ahịa anyị, Issuu abụrụla ụzọ isi kesaa ọrụ anyị na ndị ọrụ na mba ahụ.
Ọ malitere site na akwụkwọ pọtụfoliyo anyị mepụtara ma bipụta na obere ogbe site na iji ya Ihe omuma (ngwá ọrụ ọzọ dị ukwuu). Anyị nwere mmasị na ahụmịhe nke otu akwụkwọ - ibu ya dị n'aka gị, peeji ndị mara mma, yana ịmegharị na oge ezumike gị. Mgbe anyị bidoro ibipụta, ịkekọrịta na inyefe akwụkwọ ndị a n'ofe mba ahụ, anyị ghọtara na anyị chọrọ ụzọ ọzọ iji kesaa ọdịnaya anyị. Usoro ederede dị ọcha nwere oke, ma ọ bụ site na ọnụ ahịa, ịdị mfe nke mmelite, ma ọ bụ oge nnyefe. Anyị chọrọ ụzọ iji nyefee ahụmịhe nke akwụkwọ, na-achọ.
Anyị achọtara azịza anyị na Issuu, usoro ntanetị nke na-ebipụta dijitalụ nke nyeere anyị aka ịkekọrịta ọrụ anyị na ọtụtụ ndị na-ege ntị ma ka na-enye nnukwu ahụmịhe. Issuu na-ejigide ụfọdụ omume dị oke mma na akwụkwọ anụ ahụ (nke miri emi na nke nchọgharị) wee mejupụta ya na ike nke ikpo okwu n'ịntanetị (ngwa ngwa ịkekọrịta, dị mfe iji melite yana ọnụ ala). Ọbịa nwere ike isi mkpịsị aka site na ihuenyo-mbipute nke akwụkwọ anyị online (lee ya n'okpuru!), Ma kesaa ibe (ma obu akwukwo a) na ndi enyi ha na ndi ozo. Ọ bụ ezie na anyị kwenyere, ọ na-esiri ike idochi mmetụta nke akwụkwọ otu abali, maka ọtụtụ ndapụta, Issuu na-arụ ọrụ nke ọma ma na-erukwa nso karịa - nke ahụ bụ ihe na-eme ka anyị jiri ngwa a.
Mepee mbipụta - N'efu ebipụta - Branddị akara
Tags: mmepe azụmahịacontent MarketingdigitalissuumarketingPublishing
Janneane bụ onye ọrụ ngo na ndị isi obodo yana ndị otu dị egwu KA + A, ebe ha na-echepụta ụdị na ahụmịhe maka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-eto eto. Ọ bụkwa ngalaba-nchoputa nke IndySpectator, ndu e-newsletter na uzo ohuru iji hu Indy n'anya, ya na blog nwanne ya, Onye na-egwu egwuregwu mmalite, raara nye mpaghara mmalite mpaghara. N'oge na-adịbeghị anya Janneane na-arụ ọrụ na-eto eto Indy si obodo ejiji obodo site ụkpụrụ, a na-ezukọ kwa ọnwa maka ndị folks nwere mmasị na ejiji.
M na-agwa onye ahịa okwu taa ma kesara post a, Janneane. Ha na ebipụta ọtụtụ broshuọ dị oke mma na ahịrị ngwaahịa ha. Nke a ga-abụ ụzọ dị mma iji soro ndị na-ege ha ntị kesaa broshuọ ndị ahụ site na kọmputa. Daalụ maka post a - ọ bụ ezigbo teknụzụ na m hụrụ KA + A broshuọ n'anya… M na-atụ anya ụbọchị m nwere ike iso ndị otu gị rụọ ọrụ iji mezie ụdị anyị!